Wararka ugu Danbeeyay Dagaalka Ruushka ee Ukraine ( 12 May )
HomeWararka CaalamkaWararka ugu Danbeeyay Dagaalka Ruushka ee Ukraine ( 12 May )
May 12, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
Kuwani waa qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee la xidhiidha dagaalka Ukraine Khamiis 12 May.
Askari Ruush ah oo la sheegay in uu nin aan hubaysnayn oo 62 jir ah ku dilay gobolka Sumy ee dalka Ukraine ayaa la horgeyn doonaa cadaaladda, sida ay maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqeen mas’uuliyiinta Ukraine. Ninkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee maxkamad loo soo taago dambiyo dagaal oo ka dhacay dalka Ukraine tan iyo markii uu Ruushka galay duulaanka 24-kii February.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Iryna Venediktova ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay sarkaal 21 jir ah oo ka tirsan guutada taangiyada ee gobolka Moscow. Sida ay sheegtay dacwad oogaha, 21-jirkan ayaa la sheegay in uu dilay ninkan xilli uu baaskiil ku waday wadada dhinaceeda tuulada Chupachivka ee waqooyi bari Ukraine. Waxa uu halis ugu jiraa ilaa 15 sano oo xadhig ah, ayay tidhi.
* Ukraine waxay kala xaajootay Ruushka sidii askarta dhaawaca ah looga soo saari lahaa warshadda birta ee Azovstal ee Mariupol si loogu beddelo askarta Ruushka ee la qabtay. Weli ma jiro wax heshiis ah, balse wada xaajoodyadu meel wanaagsan ayay marayaan, ayay Facebook-ga ku qortay ra’iisal wasaare ku xigeenka Iryna Vereshchuk.
Vereshchuk ayaa Talaadadii sheegay in in ka badan 1,000 askari looga tagay birta, boqolaal ka mid ahna ay dhaawacmeen. Waxay qortay in dawladdu ay hadda ka shaqaynayso waddooyin dhowr ah si ay askarta uga soo saarto birta, laakiin waxa ay ku nuuxnuuxsatay in aanay suurtogal ahayn.
* Xayiraadda lagu soo rogay Dhoofinta Microchips-ka iyo Tignoolajiyada kale ee loo dhoofiyo Ruushka oo ay soo rogeen Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa si weyn u saamaynaysa awoodda Ruushka ee soo saarista agabka Milatari, sida ay sheegtay Xoghayaha Ganacsiga ee Maraykanka Gina Raimondo.
Waxay u sheegtay Senet-ka Arbacadii in Maraykanku uu warbixin ka helay dadka reer Ukraine ee helay qalabka Ruushka, in qalabkani uu leeyahay microchips Raimondo ayaa sidoo kale sheegay in labo ka mid ah warshadaha soo saara taangiyada Ruushka ay albaabada u laabeen, isla markaana shirkadaha sameysa gawaarida ee dalkaasi ay fasaxeen shaqaalahooda.